Maraoka: Fampianarana ny teny “Berbery” any an-tsekoly · Global Voices teny Malagasy
Maraoka: Fampianarana ny teny “Berbery” any an-tsekoly
MpanoratraJillian C. York
Voadika ny 09 Septambra 2009 20:29 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Tifinagh in use
Niteraka resa-be tao amin'ny tontolon'ny blaogy Maraokana ny lahatsoratry ny BBC News iray momba ny fampianarana ny “teny Berbery” any Maraoka. Ilay lahatsoratra, izay manasongadina ireo safidim-mpampianarana hianarana sy handalinana ilay fiteny, sy manome fanazavana momba ny fivoaran'ny alfabeta Tifinagh, dia niteraka karazan-dahatsoratra maro. The View from Fez, blaogina mpila ravinahitra, dia nametraka ny fanontaniana hoe “ mety hisolo ny Arabo ve ny Berbery, ho tenim-pirenena ofisialy Maraokana? ” Ny valiny nomen'ilay mpitoraka blaogy?
N y valiny tsotra dia tsia, tsy hisolo toerana ny Arabo na oviana na oviana ny Amazigh, nefa izany tsy manakana ny olona haniry ny hitrangan'izany. Tao amina fanadihadian'i BBC vao haingana, Abullah Aourik, mpanakanto sy mpamoaka gazetiboky iray amin'ny Amazigh, dia niteny fa te-hahita ny Berbery hisolo ny teny Arabo ho tenim-pirenena ofisialy any an-toerana.
Nanamarika anefa ilay mpitoraka blaogy fa efa noraisina ho isan'ny tenim-pirenena ofisialin'ireo firenena maro mpiray vodirindrina sasany ny Amazigh, isan'izany i Alzeria.
Nalaky dia nalaky ny Reading Morocco, blaogy mifantoka amin'ny literatiora, vaovao ary blaogy Maraokana, tamin'ny fitsikerana ilay lahatsoratra:
Manana olana vitsivitsy aho amin'ny votoatin'ity lahatsoratra ity (toy ny mahazatra). Tsy dia kinga loatra amin'ny fampitahana ny Berbery sy ny Arabo aho raha efa raiki-tampisaka anatin'ny tantara Maraokana ny fifangaroan'ireo ” identities” roa ireo, ary tsapako koa fa ny laika sy ny misionary Kristiana dia (izy roa samy mirona amin'ny fankahalana silamo) tia mametraka ny dian-tànan'izy ireo ao anatin'io “fivakisana” ara-kolontsaina sy ara-pinoana io.
Mitsikera toy izany koa ny valin'i ‘Aqoul‘s :
Voalohany, raha nisy kasinga sy faniriana marina hanana fomba fanoratana ny teny Bebery izay hampidina ny tahan'ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra sy ny fiantraikany marina eo amina avarapianarana na mafana fo ara-kolotsaina vitsivitsy, mety nifidy na ny alfabeta latina izy ireo, na raha te-hizotra amin'ny fametrahana tantara tsara fototra izy ireo, dia nifidy ny fomba fanoratra Arabo nampiasain'ireo mponina tamin'ny vanim-potoana faha-mpanjaka sy ny vanimpotoana nampiasana ny teny Chleuh (Tachelhite) nanoratana ireo Chleuh Berbery.
Kal, iray nitsikera ilay lahatsoratra (ary mpitoraka ilay blaogy The Moor Next Door), dia nizara ‘anecdotes’ heno tany ambanivohitr'i Maraoka momba ny fomba fampianarana ny Tifinagh:
Raha misy iray miresaka amin'ireny ankizy avy amina tanàna tsy mahay mamaky teny sy manoratra any an-tendrombohitra sy atsimo, tsapako fa somary ketraka ry zareo amin'ny faniriana ofisialy hampianatra azy ireo amin'ny Tamazight; fa maninona raha ampianarina mamaky teny sy manoratra amina teny azony ampiasaina aloha ry zareo, toy izay hampien-danja azy ireo amina teny tsy hitondra azy ireo lavitra noho ny efa misy azy izao? Naheno olona maro avy any Sousse aho nanoritsoritra ny ezaka fampianarana Tamazight sy mankalaza be ny Tifinagh toy ny “tsikombakomba” hitazonana ireo fiaraha-monina Berbery amin'izao toerana mifotetaka efa misy azy izao. Na ahoana na ahoana ny mahamety na tsia an'izany, misy malailay fonosana amin'ny fampitovian-drafitra ihany koa, izay midika famelana ny tenindreny sy ny fiainana andavanandro manoloana tanjona iray tsy mbola hita fiafarana sy mampiahiahy.
Ho an'ireo izay liana, vakiteny iray mahavariana momba izany nosoratan'i Katherine E. Hoffman, Mizara rindrina izahay: Teny, Tany, ary ny Miralenta ao anatin'i Maraoka Berbery (We Share Walls: Language, Land, and Gender in Berber Morocco. )
Tantaran'ny Maraoka farany
Bahrain 04 Septambra 2021
Fitantanam-pitondrana 23 Jolay 2021
Bahrain 18 Jona 2021